डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था खतरामा, खतराको जिम्मा प्रतिष्ठानले नलिने
सुर्खेत, १८ असार । जुम्लामा शनिबारदेखि अनसनमा बसेका हाडजोर्नी चिकित्सक डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था खतरामा रहेको छ । डा. केसीको हातखुट्टा, टाउको, छाती दुख्ने समस्या बढ्दै गएको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाका मेडिकल डाइरेक्टर डा. पुजन रोकायाले बताए । “२४ घण्टामा २०० मिलिलिटर मात्र पिसाब भएको छ । स्वास्थ्य
संविधान जारी भएयता डेढ सय विदेशीलाई अङ्गीकृत नागरिकता
२५ फागुन, बाँके । नेपालको संविधान जारी भएयता झन्डै १५० विदेशी महिलाले अङ्गीकृत नागरिकता पाएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तथ्याङ्कानुसार संविधान जारी भएको असोज ३ गतेपछि जिल्लामा १४१ विदेशी महिलाले नेपाली नागरिकता पाएका हुन् । संविधानको धारा १० को उपधारा ६ मा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी
कांग्रेस महामन्त्रीमा शशांक कोइरालाको जित सुनिश्चित
२५ फागुन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको महामन्त्रीमा शशांक कोइरालाको जित सुनिश्चित भएको छ । जारी मत गणनामा अर्जुननरसिंह केसी दोस्रो र गगन थापा तेस्रो स्थानमा रहे । आइतबार भएको निर्वाचनको मत गणना मंगलबार भएको थियो । जसमा बीपी पुत्र शशांक अगाडि छन् । अब २४८ मत मात्र गणना हुन बाँकी
२५ फागुन, चितवन । नेपालका लागि भारतीय राजदूत रञ्जीत रायले नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको भारतको राजकीय भ्रमणले नेपाल भारत सम्बन्ध अझै प्रगाढ बनेको दावी गरेका छन् । आपूर्ति हुँदा पनि इन्धन लगायतका सामाग्री अझै सहज नहुनुमा नेपाल सरकारले छानविन गर्नुपर्ने उनले बताए । अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको उपलक्ष्यमा तथा नेपाल
कांग्रेस नेतृत्वको सरकार तत्काल असम्भव: सीपी मैनाली
ओली नेतृत्वको सरकार चुनावसम्मै टिक्ने दाबी
२५ फागुन, काठमाडौं । उपप्रधान तथा महिला, बालबालिका एवम समाज कल्याण मन्त्री सीपी मैनालले चुनावसम्मै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार टिक्ने दावी गरेका छन् । कांग्रेस महाधिवेशनपछि सरकार परिवर्तन हुने चर्चा चलिरहेका बेला मैनालीले कांग्रेसको नेतृत्वमा तत्काल सरकार नबन्ने दाबी गरे । रिपोर्टर्स क्लब नेपालले मंगलबार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा मैनालीले
कर्मचारीलाई मन्त्री शर्माको निर्देशन- चाकडी छाड्नुस्, जनताप्रति उत्तरदायी हुनुस्
मन्त्रालयका सचिवलाई कम्तिमा तीन वर्षसम्म सरुवा नगर्न प्रस्ताव
२५ फागुन, इलाम । सामान्य प्रशासन मन्त्री रेखा शर्माले मन्त्री वा सचिवप्रति भन्दा जनताप्रति उत्तरदायी भएर काम गर्न कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिएकी छन् । कुनै एउटा मन्त्रालयको सचिवलाई कम्तिमा तीन वर्षसम्म सरुवा गर्न नपाइने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद बैठकमा आफूले राखेको उनले जानकारी पनि दिइन् । जिल्ला विकास समिति इलाममा कर्मचारीहरुसँग मंगलबार गरिएको
राष्ट्रिय सरकार बनाउने बिषयमा देउवासँग छलफल गर्छु : प्रचण्ड
२५ फागुन, चितवन । एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले नेपाली काँग्रेसका नवनिर्वाचित सभापतिसँग भेटी राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन पहल सुरु गर्ने बताएका छन्। पश्चिम चितवनको नारायणी नगरपालिका–४ अमृतनगरमा निर्मित सहिद स्मारक प्रतीक्षालयको मंगलबार उद्घाटन गर्दै उनले प्रमुख दलहरु सरकारमा नै रहेर संविधान कार्यान्वयन र पुनः निमार्णमा जुट्नुपर्ने बताए
धनुषाका डिएफओलाई कुटपिटको अभियोगमा एमाओवादी नेता पक्राउ
२५ फागुन, जनकपुर । जिल्ला वन कार्यालय धनुषाका प्रमुख वीरेन्द्र साहमाथि कुटपिटमा संलग्न रहेको अभियोगमा एकीकृत नेकपा माओवादीका नेता देव सागर दासलाई धनुषा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । आइतबार दिउँदो एकीकृत नेकपा माओवादीका सभासद् राम सिंह यादव र केन्द्रीय सदस्य रामचन्द्र मण्डल नेतृत्वमा एमाओवादी कार्यकर्ताले कार्यालय प्रमुख समेत रहेका जिल्ला
शेरबहादुर र सत्ताः अब ओलीकै नेतृत्वमा कि देउवाको ?
परीक्षा शेरबहादुरको मात्रै होइन, प्रचण्डको पनि
२५ फागुन, काठमाडौं । विगतमा संसदीय फोहोरी राजनीतिको दाग लागेका शेरबहादुर देउवा नेपाली कांग्रेसको सभापति बनेकै रात उनका सहयोगी नेता वालकृष्ण खाँडले अब देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने बताए । केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको ६ महिना पनि बितेको छैन । के अब देउवाले सरकार परिवर्तनको खेल शुरु गर्लान्
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य खुलातर्फको मतगणना भोलि
२५ फागुन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्यको खुलातर्फको मतगणना भोलि हुने भएको छ । सभापतिसहित महामन्त्री र कोषाध्यक्षको मतगणना सकिएपछि अब केन्द्रीय सदस्यहरुको मतगणना हुन लागेको हो । निर्वाचन समितिका अनुसार भोलि विहान १० बजे केन्द्रीय सदस्यको खुलातर्फको मत गणना हुनेछ । खुलातर्फ २५ पदका लागि ९० उम्मेदवार छन्
रामचन्द्रले हारे पनि सीताले जितिन् !
यी हुन् कांग्रेसकी शक्तिशाली महिला
२५ फागुन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसमा रामचन्द्रको हार भए पनि सीताको जीत भएको छ । कोषाध्यक्षमा चर्चित प्रतिद्वन्द्वी चित्रलेखा यादवलाई हराउने यी रामचन्द्रभन्दा पनि शक्तिशाली सीता को हुन् ? दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा सिराहा-३ बाट प्रत्यक्ष चुनाव जितेकी सांसद हुन् सीतादेवी । उनी सिराहाकी पार्टी सभापतिसमेत हुन् । प्रवीणता प्रमाणपत्रसम्म पढेकी
कांग्रेसकी नवनिर्वाचित कोषाध्यक्ष यादवले भनिन्-मधेसको माग पुरा गर्छु
२५ फागुन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नवनिर्वाचित कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवले मधेसको माग सम्बोधन गर्न पहल गर्ने बताएकी छन् । निवर्तमान कोषाध्यक्ष चित्रलेखा यादवलाई ८ मतले पराजित गर्दै ६० वर्षीया यादव कोषाध्यक्षमा निर्वाचित भएकी हुन् । कोषाध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि यादवले आफूले पाएको मत सहिदको सम्मान भएको बताएकी छन् । उनका पती
शशांक कोइरालाः आँखाकाे डाक्टरदेखि कांग्रेसको महामन्त्रीसम्म
२५ फागुन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको महामन्त्री पदमा विजयी बनेका डा. शशांक कोइराला वीपीका कान्छा छोरा हुन् भन्ने सबैलाई थाहा छ । तर, शशांकको जीवनको भित्री पाटोचाँहि कमैलाई मात्र जानकारी छ । नेपाली कांग्रेसमा कोइराला परिवारको अवसान सुरु भएको चर्चा चल्दै गर्दा केन्द्रीय पदाधिकारी टीममा डा. शशांक एकमात्र पारिवारिक प्रतिनिधिका
हिमालय एयरलाइन्सको एयरबस भोलि आउँदै चैत ३० देखि व्यवसायिक उडान, पहिलो गन्तव्य दिल्ली
२५ फागुन, काठमाडौं । निजी वायुसेवा कम्पनी हिमालय एयरलाइन्सले बुधबार आफ्नो पहिलो एयरबस नेपाल भित्र्याउने भएको छ । कम्पनीको ए३२० एयरबस दिउँसो एक बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण हुने छ । तिब्बत एयरलाइन्ससँग सहकार्य गरेर हिमालयले नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा प्रदान गर्न लागेको हो । यही चैत ३० गतेदेखि व्यवसायिक